रोएर हि’म्मत हा’र्न हुँदैन। रोयो भने अ’पराधीहरूको हौ’सला बढ्छ ! – eSidhakura
मुख्य पृष्ठसमाचाररोएर हि’म्मत हा’र्न हुँदैन। रोयो भने अ’पराधीहरूको हौ’सला बढ्छ !
रोएर हि’म्मत हा’र्न हुँदैन। रोयो भने अ’पराधीहरूको हौ’सला बढ्छ !
९ श्रावण २०७७, शुक्रबार काठमाडौं । बिहीबार काठमाडौंको बाफलमा ए’सिड प्र’हारबाट घा’इते बनेकी पवित्रा कार्कीलाई अर्की ए’सिड पी’डित मुस्कान खा’तुनले अस्पतालमा भेटेर हौ’सला दिएकी छिन् । शुक्रबार बिहान कीर्तिपुरस्थित कीर्तिपुर अस्पताल पुगेकी खा’तुनले कार्कीलाई भेटेर भनेकी छिन्– रो’एर हि’म्मत न’हार्नु, अ’पराधीहरुको हौ’सला बढ्छ । बाफल घ’टनाबारे थाहा पाएपछि आफ्ना बाबुलाई भनेर मु’स्कान बिहानै पवित्रालाई भेट्न र हौ’सला दिन अस्पताल पुगेकी हुन्। ‘रो’एर हि’म्मत हा’र्न हुँदैन ।
रो’यो भने अ’पराधीहरूको हौ’सला बढ्छ’, पवित्रालाई हौ’सला दिदैं मु’स्कानले भनिन्। मु’स्कानमाथि पनि गत वर्ष भदौ २० गते बिहान ६ बजेको समयमा दुई किशोरले ए’सिड प्र’हार गरेका थिए। ए’सिड प्र’हारबाट ग’म्भिर घा’इते खा’तुनलाई त्यतिबेला देशभित्रबाट नभई थुप्रै बलिउड कलाकारले भिडिओमार्फत स्वास्थ्य लाभको कामना गर्दै हौ’सला प्रदान गरेका थिए। मु’स्कानले पवित्रामाथि आ’क्रमण गर्ने दो’षी रौटहट लक्ष्मीपुर घर भइ काठमाडौंस्थित डल्लु बस्दै आएका मो’हम्मद आ’लम र भारतीय ना’गरिक मु’न्ना म’हमदलाई क’डा का’रवाही गर्नुपर्ने मा’ग गरेकी छन्।
बिहीबार साँझ पौने आठ बजे नागार्जुन नगरपालिका–४ सृजनशील टोलमा ओखलढुङ्गाकी २२ वर्षे पवित्रा कार्कीमाथि ए’सिड प्र’हार भएको थियो। ए’सिड प्र’हार गरिएकी पवित्राको गा’ला, हात र कपालमा ए’सिड परेको छ। घ’टना भएको केही घण्टामै ए’सिड प्र’हार गर्ने व्यक्तिहरूलाई महानगरीय प्रहरी कार्यालय रानीपोखरी र अ’पराध महाशाखाको टोलीले पक्राउ गरेको थियो । प्रहरीले सि’सिक्यामेरा फु’टेजको आधारमा प’हिचान गर्दै उनीहरूलाई पक्राउ गरेका हो।